Fanorenana sy vaovao Toby, fampitam-baovao 01/11/2019 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
NY TEOLOJIAN’NY ADVENTO
TOBY POURU SAINT-REMY
Miray amin’ny TOBILEHIBE ANKARAMALAZA
« Ary Ataovy ny trano dia hankasitralhako izany, sady hankalazaina aho, hoy Jehovah. » Hagay 1.81
Pouru Saint Remy, faha 1 novambra 2019
Ho ampitomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny ﬁadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika.
Fifaliana ho anay indray no manome ny vaovao mikasika ny fanorenana ny trano ho Toby. Dingana lehibe izany hitomboan’ny asan’ny Tompo ao amin’ny Toby sy ahatanterahan’ny teny fikasàna.
1. Mahatratra 208 000€ izao ny vola an-tanana, ao amin’ny kaontin’ny Toby.
Araka ny efa voalaza teo aloha dia ampy anombohana ny asa io vola io, raha toa ka mitohy tsy miato ny fanomezana. Toy izao ny antsipirihany:
– 308 000€ ny vola voahangona hatramin’ny fanombohana ny asa
– 83 000€ nividianana ny tany hanorenana ny trano ho Toby
– 9 000€ + 7 000€ nomena ho karaman’ny mpiara-miasa « Maître d’oeuvre » (Enreprise Procimmo mivantana), nanaovana ny « Pré-étude » sy « plan », « estimation » voalohany ary fanomanana ny « dossier permis de construire ».
– 1000€ tapany voalohany amin’ny fanamboarana ny site web (1500€ no sisa mila efaina).
2. Fitohizan’ny asa: Mitohy ny fanomanana ny “appel d’offre” hisafidianantsika ny “maître d’oeuvre”. Niatrika fahasarotana samihafa, izay tsy nampoizina mialoha, ny vaomieran’ny fanorenana. Efa manakaiky anefa ny tanjona, mangataka ny vavaka avy amintsika mba ho tomombana soa aman-tsara ny “appel d’offre”. Izany dia kasaina ho aparitaka amin’ity faran’ity taona 2019 ity.
– Fahasarotana mikasika ny ara-teknika: tsy mora ny fanoratana ny antontan-taratasy ilaina amin’izany, indrindra fa ny lafiny “juridique”. Tena manao ny ainy tsy ho zavatra tokoa ny teknisianina ao anatin’ny ny vaomiera sy ao anatin’ny “Atelier juridique”. Efa manakaiky ny famaranana isika ka tokony amin’ny volana novambra no ho vonona izany dossier izany, raha tamin’ny aprily no natomboka
– Fahasarotana ara-panahy: niatrika ny fahalasànan’ny Ray aman-dreny tonian’ny Fifil, Pastora Andrianarijaona Germain koa isika rehetra tamin’ny volana Jona, ka nisy volana iray maninjitra, najanona ny asa. Avy eo moa dia nandalo ny fiatoana mandritra ny “vacances d’été”.
Tena zava-dehibe ny safidy “maître d’oeuvre”. Miasa ny teknisianina ary mivavaka isika rehetra mba hiasa Andriamanitra hameno sy hahalavorary izay atao.
3. Tokony efa maharay rosia na « confirmation » ny vola nalefany ny tsirairay izay mandefa vola ao amin’ny kaontin’ny Toby. Raha tsy mbola naharay rosia isika ka te hahazo izany dia azo omena an’ny mpitam-bolan’ny Toby ny adiresy “mail”.
4. Mikasika ny « électricité »
Mitohy ny antso avo ho an’izay rehetra manan-talenta hikarakara ny « plans électriques courant fort sy courant faible ». Aza misalasala miantso ny tompon’andraikitra ao an-toerana: RANDRIAMBOLOLONA Jean, 06 11 39 60 73.
5. Mikasika ny lakozia
Mitohy ihany koa ny antso avo amin’ny fanangonana fanaka an-dakozia « professionnel » toy ny régfrigérateur, four à étage, marmite chauffante 80L. Aza misalasala ihany koa miantso ny tompon’andraikitra raha te-hanao fanomezana ianao na mahita fanaka an-dakozia « professionnel » hovidian’ny Toby.
Eto am-pamaranana, mitohy hatrany ny famoriam-bolantsika ho an’ny asa fanorenana, isam-batan’olona, isan-tokantrano, isam-piangonana, fitandremana, fileovana…
Tsy latsaka izany dia aza adino ny mitondra am-bavaka isan’andro isan’andro ny ASA rehetra hatao mikasika io fanorenana ny Toby io.
Manolotra fisaorana feno ho an’izay efa nandray anjara sy mbola mazoto hanohy izany.
Manao veloma finaritra anareo amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo.
Amin’ny anaran’ny Biraon’ny Komitin’ny Toby
Dr. RANDRIAMBOLOLONA Jean